लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले गरेका दुई प्रस्ताव पारित भएपछि प्रदेश २ को नाम मधेश प्रदेश र स्थायी राजधानी जनकपुरधाम भएको छ। अब प्रदेश १ ले मात्रै नाम र स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाउन बाँकी छ।
नेपालमा गत वर्षदेखि सुरु गरिएको कोभिड खोप वितरण गर्ने अभियानसँगै सरकारले बूस्टर मात्रा पनि दिने निर्णय गरेको छ। तर धेरै ठाउँमा वितरणमा समस्या देखिएको छ।
प्रशान्त महासागरमा ज्वालामुखी विस्फोटन हुँदा आएको सुनामीका कारण टोङ्गामा हजारौँ मानिस प्रभावित भएको अनुमान गरिएको छ।
नेपालसँगको सीमावर्ती भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश भारतको राजनीतिमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर के उत्तर प्रदेशमा चुनाव हुनुअघि नरेन्द्र मोदीले नेतृत्व गरेको सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मा विद्रोहको लहर सुरु भएको हो?
समग्रमा उनीहरूको सम्पत्ति ७०० अर्ब अमेरिकी डलरबाट १५ खर्ब डलर पुगेको अक्सफाम नामक परोपकारी संस्थाले जनाएको छ।
तीन दिदीका एक्ला भाइ प्रिन्स दाहालले नेपाली खेलकुदमा एउटा सुनौलो इतिहास रचेपछि ओलिम्पिक्सलाई लक्ष्य बनाएका छन्।
लिपुलेक समस्याबारे नेपाल सरकार बोल्यो: 'ऐतिहासिक प्रमाणबाट सल्टाउनुपर्छ'
काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावासका प्रवक्ताले नेपाल र भारतबीच देखिएका सीमा समस्याको स्थापित अन्तर्देशीय संयन्त्रबाट समाधान गरिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको एक दिनपछि नेपाल सरकारको धारणा सार्वजनिक भएको हो।
लिपुलेक विवाद मिलाउन नेपाल सरकारले के गर्नुपर्छ?
वार्ताबाट सीमा समस्या समाधान नभएसम्म भारतले लिपुलेकमा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्नु नहुने परराष्ट्रविद्हरू बताउँछन्।
टेनिस खेलाडी नोभाक जोकोभिचको अस्ट्रेलियाबाट देशनिकाला
अस्ट्रेलियाको सङ्घीय अदालतले ३४ वर्षीय सर्बियाली नागरिक जोकोभिचले भिसा रद्द गर्ने सरकारको निर्णयलाई कायम राखेको छ।
खोप कार्ड कहाँकहाँ अनिवार्य, हराए के गर्ने र लिन कहाँ जाने?
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आफ्नो कार्ड सुरक्षित राख्न र विद्युतीय कार्डका लागि दर्ता गराएर खोप लगाएको प्रमाण सधैँका निम्ति सुरक्षित गर्न आग्रह गरेका छन्।
कोभिड-१९ विरुद्ध कति मात्रा खोप लगाउनुपर्छ
स्वास्थ्य मन्त्रालयस्थित स्रोतले धेरै विशिष्ट व्यक्तिहरूले कोभिडविरुद्ध बूस्टर मात्रा खोप लगाइसकेको जानकारी दिएको छ। अधिकांशले पहिले लगाएकै खोप बूस्टर मात्रामा लगाएका छन् भने केहीले फरक खोप लगाएको बताइएको छ।
कोरोनाभाइरस सरेको शङ्का लागे यी छवटा काम गर्नुहोस्
अहिले विश्वभरि फेरि कोभिड भएका मानिसको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ। कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएको शङ्का लागेमा के गर्नुपर्छ?
'माघ १५ सम्म विद्यालय बन्द गरेर कोभिड खोप'
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार उक्त अवधिमा १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई सबै स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य चौकीबाट कोभिड खोप वितरण गरिनेछ।
ओमिक्रोन सङ्क्रमण भएको छ कि छैन कसरी थाहा पाउने
पीसीआर परीक्षणका लागि लिइएको स्वाबबाट कोरोनाभाइरसको ओमिक्रोन भेरिअन्ट पहिचान हुन सक्छ। कतिपय अवस्थामा स्वाब पठाइएको प्रयोगशालामा पनि नतिजा निर्भर हुन्छ।
तेस्रो वर्षमा कोभिड: हामीले सिकेका पाँच कुरा
सन् २०१९ को डिसेम्बर ३१ मा चीनले आफूले एउटा नयाँ कोरोनाभाइरस पत्ता लगाएको बताएको थियो। उक्त दिनपछि विश्वमा देखा परेका पाँच परिवर्तनको चर्चा।
३० डिसेम्बर २०२१
कोभिड भयो भने के गर्ने?
कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएको अवस्थामा तपाईँले जान्नैपर्ने कुरा यस्ता छन्।
२२ डिसेम्बर २०२१
के नाकबाट पानी बग्नु ओमिक्रोनको लक्षण हो
कोरोनाभाइरसको नयाँ भेरिअन्ट ओमिक्रोन विश्वभरि द्रुत गतिमा फैलिरहेको छ। मानिसहरू कस्ता लक्षणप्रति सावधान हुनुपर्छ?
२३ डिसेम्बर २०२१
बालबालिकामा कोभिड सर्ने सम्भावना कति, कसरी जोगाउने
नेपालमा विद्यालय जाने र अरू बालबालिकामा पनि फाट्टफुट्ट कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखा परेको छ। अन्य भाइरल सङ्क्रमणको जोखिम रहेको अवस्थामा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ र यी सबैबाट उनीहरूलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ?
२१ डिसेम्बर २०२१
ताइवान र चीनबीच तनाव बढेको छ। अब जे हुन्छ त्यसले हामी सबैलाई प्रभाव पार्छ।
भारतको पञ्जाबमा १९ वर्षअघि शरीर जोडिएका जुम्ल्याहा दाजुभाइलाई आमाबुवाले परित्याग गरेका थिए।
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणदर उकालो लाग्दै गर्दा परीक्षणको दायरा पनि बढ्दै गएको छ। पीसीआर परीक्षणसँगै मानिसहरूले एन्टिजन किटबाट पनि आफूलाई सङ्क्रमण भएको वा नभएको यसरी पत्ता लगाउन सक्छन्।
श्रीलङ्काको जाफ्नामा चङ्गासँगै एक व्यक्ति पनि आकाशमा उडेपछि उनका साथीहरूले निकै मेहनत गरेर उनलाई भुइँमा ओराले।
प्रहरीले डार्कनेटको लागुपदार्थ बजार बन्द गराउँदा अधिकांश विक्रेता फेरि अर्को मञ्चमा देखा पर्ने गरेको बीबीसीको अनुसन्धानले देखाएको छ।
अहिलेलाई एक जना मात्र बस्न मिल्ने यो विद्युतीय कारले भविष्यमा परम्परागत कार विस्थापित गर्ने र मानिसहरू काममा उडेर जान सक्ने उत्पादकहरूले आशा राखेका छन्।
टिकटक विश्वमा सबैभन्दा बढी डाउनलोड गरिएको एप थियो त्यसमा सन् २०२० को तुलनामा प्रयोगकर्ताहरूले ९० प्रतिशत बढी समय बिताए।
भारतमा बेरोजगारी तीन दशकयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। कोरोनाभाइरस महामारीले पहिलेदेखि नै केही सुस्त भएको एशियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रलाई अस्तव्यस्त बनाइदिएको छ।
भिडिओ, पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दा प्रयोग भएका हतियार , समयावधि 2,03
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दा उनको सेनाले प्रयोग गरेका केही हतियार काठमाण्डूको हनुमानढोकाको गद्दी बैठकमा प्रदर्शनीमा राख्न लागिएको छ।
सन् २०२१ का सशक्त २५ तस्बिर
सन् २०२१ मा विश्वभरि खिचिएकामध्ये केही सशक्त तस्बिरलाई यहाँ छनौट गरिएको छ।
गिद्ध संरक्षण गर्ने रेस्टुराँका तस्बिरहरू
संरक्षणकर्मीहरूले प्रकृतिको कुचीकारका रूपमा चिनिने गिद्धको सङ्ख्या वृद्धिलाई संरक्षणमा निकै ठुलो उपलब्धिको रूपमा मान्ने गरेका छन्।
यो वर्ष विश्वभरि खिचिएका १२ घतलाग्दा तस्बिर
अमेरिकी संसद् भवनको दङ्गा, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रदर्शन र कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी तस्बिरलाई एक कवि र कला इतिहासकार केली ग्रोभिअरले सन् २०२१ को सबैभन्दा घतलाग्दा तस्बिर भनेका छन्।
तस्बिरमा क्रिसमसः कतै प्रार्थना, कतै गैँडालाई उपहार
लगातार दोस्रो वर्ष कोभिड महामारीका कारण अरू चाडपर्वजस्तै क्रिसमस पनि प्रभावित भएको छ। तर पनि यसको उल्लास घटेको देखिँदैन।
२६ डिसेम्बर २०२१
तस्बिर सङ्ग्रह, भारतकी हरनाज सन्धू बनिन् मिस यूनिभर्स
पञ्जाबकी हरनाज सन्धु मिस यूनिभर्सको उपाधि जित्ने तेस्री भारतीय युवती बनेकी छन्।
१३ डिसेम्बर २०२१
कोभिड बढेपछि थप प्रतिबन्ध, परीक्षण गरिएका एकतिहाइमा सङ्क्रमण पुष्टि
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइतवार अपराह्ण प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कले २४ घण्टाको अवधिमा गरिएका परीक्षणको झन्डै ३६ प्रतिशतमा कोभिड पुष्टि भएको देखाउँछ।
साइबर हमलाकारी रीभील समूह रुसमा पक्राउ
रुसको सरकारी समाचार सेवा तासका अनुसार रीभीलले "खराब सफ्टवेयर निर्माण गरेर" विदेशी नागरिकका ब्याङ्क खाताबाट "सङ्गठित रूपमा पैसा चोरी" गरेको थियो।
भिडभाडका कारण सरकारी कार्यालय नै कोभिड 'हटस्पट' बन्ने जोखिम
उपत्यकामा अहिले देशभरि भएका सक्रिय सङ्क्रमितमध्ये आधाभन्दा बढी छन् भने दैनिक पुष्टि हुने सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि दिनदिनै बढिरहेको छ।
मृत्यु भएको ठानिएका अमेरिकी भगौडा एक वर्षपछि स्कटल्यान्डमा पक्राउ
बलात्कार तथा अन्य अपराध गरेको आरोप लागेका एक अमेरिकी नागरिक एक वर्षअघि बेपत्ता भए, उनको मृत्यु भएको ठानियो। तर अहिले कोभिड भएपछि उनी नाटकीय रूपमा विदेशको एउटा अस्पतालमा फेला परेका छन्।
भिडिओ, माघे सङ्क्रान्तिमा किन खाइन्छ घ्यू, चाकु र तरुल, समयावधि 1,28
माघे सङ्क्रान्तिमा खाइने घ्यू, चाकु, तिलको लड्डु र तरुलजस्ता खानेकुराको ठूलो सांस्कृतिक महत्त्व भएको संस्कृतिविद्ले बताएका छन्।
उत्तर कोरियाली ह्याकरले '४० करोड डलरको क्रिप्टोकरेन्सी चोरे'
ब्लकचेनबारे अनुसन्धान गर्ने संस्था चेनएनलिसिसका अनुसार ह्याक गरेर चोरिने डिजिटल मुद्राको मूल्य ४० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।
कोभिड खोप वितरणको चुनौती दर्साउने भाइरल तस्बिर
यो तस्बिर विश्वकै सबैभन्दा दुर्गम ठाउँमध्ये एक मानिने एमजन क्षेत्रमा खोप पुर्‍याउन खेप्नुपरेको कठिनाइको प्रतीक बनेको छ।
भिडिओ, नेपालमा विदेशी श्रमिक के काम गर्छन्?, समयावधि 3,01
नेपालमा हाल कार्यरत ८२९ जना विदेशी कामदारमध्ये सबैभन्दा धेरै मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा १४९ जना र ह्वासिन सिमेन्टमा ११६ जना रहेको विभागले जनाएको छ।
अमेरिकामा बाइडनको खोप नीतिमाथि सर्वोच्च अदालतको रोक
अदालतको यो निर्णयले कोभिड-१९ विरुद्ध लड्नका लागि ह्वाइट हाउसले लिएको नीतिमाथि धक्का लागेको छ।
आमाको जीवन बचाउन अङ्ग साटासाट गरेर ऐतिहासिक उपचार गर्ने किशोरी
जब एलिएना डेभेज १९ वर्षकी थिइन् तब उनले आफ्नी आमाको प्रत्यारोपण उपचारका लागि आवश्यक अङ्ग दान मार्फत प्राप्त गर्न नचिनेको अर्कै मान्छेलाई आफ्नो मिर्गौला दिएकी थिइन्।
'वीरतापूर्ण कार्यका लागि' स्वर्ण पदक पाएको मुसाको मृत्यु
सन् २०२० मा मागावा नामको उक्त मुसालाई जीवन बचाउने कार्य गरेको भनेर पीडीएसए स्वर्ण पदक दिइएको थियो।
पहिलो पटक अमेरिकामा मान्छेमा सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण
अमेरिकाको मेरिल्याण्डस्थित बाल्टिमोरका चिकित्सकहरूले सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरिएका ५७ वर्षीय डेभिड बेनेटको शल्यक्रियाको तीन दिनपछि शरीरले राम्रो प्रतिक्रिया जनाइरहेको बताएका छन्।
तुर्कमेनिस्तान 'नरकको द्वार' मा दन्किरहेको आगो निभाउन चाहन्छ
काराकुम मरुभूमिस्थित एउटा विशाल खाडलमा दशकौँदेखि आगो बलिरहेको छ, त्यसैलाई 'नरकको द्वार' नाम दिइएको छ।
के चीनले गरिब देशलाई तिर्न नसक्ने गरी ऋणको भारी बोकाएको हो?
गरिब देशहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता बनेको चीनले ऋण दिने प्रक्रियाबारे आलोचना खेप्दै आएको छ।
दक्षिणबाट भागेर उत्तर कोरियाः कसरी छले सुरक्षाकर्मी र निगरानी क्यामरा
एक व्यक्ति सधैँ उच्च रहने सुरक्षा व्यवस्थाबीच दक्षिण कोरियाबाट भागेर उत्तर कोरिया पुगेका थिए। ती व्यक्ति उत्तर कोरियाली जिमनास्ट भएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।
छैटौँ नाम प्रचण्डबाट चिनिने यी नेता कसरी ३२ वर्षदेखि पार्टी प्रमुख छन्
विभिन्न समयमा फेरेका छ वटामध्येको एउटा नाम 'प्रचण्ड'बाट आफूलाई चिनाउने पुष्पकमल दाहालले निरन्तर ३२ वर्षदेखि पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
सलामी किन पटकपटक विवादमा पर्छ
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले अहिलेसम्म सलामी दिने कुरा परम्परा र प्रक्रियाबाट चलिराखेको बताउँदै अब कानुनको आवश्यकता महसुस भएको बताएका छन्।
विमानको शौचालयमा फोहोरदानीभित्र नवजात शिशु
विमानस्थलका अधिकारीहरूले विमानको नियमित जाँच गर्दा त्यहाँ भर्खर जन्मिएको जीवित शिशु फेला पारेका थिए।
भारतले जित्न नसकेको एउटा युद्ध
भारतका सडक होऊन् वा भित्ता - खकार तथा पान र गुटखका रङ्गीचङ्गी थुकले टाटेपाङ्ग्रे भएका हुन्छन्। भारतमा मानिसहरू किन जथाभावी थुक्छन्?
क्रिस्टियानो रोनाल्डोको सालिकले भारतमा विवाद
पोर्चुगलका चर्चित फुटबल खेलाडीको प्रतिमा कुनै बेला पोर्चुगालको उपनिवेश रहेको गोवा राज्यमा अनावरण गरिएको हो।